Nezvedu - Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co, Ltd iri munzvimbo yakaorera yeYangtze River Delta yezvehupfumi geometric centre., Kumashure rwizi Yangtze, Taihu yakatungamira. Kumabvazuva kuenda kuChinese upfumi nzvimbo-Shanghai makiromita zana nemakumi mashanu, kumadokero kubva kuguta rekare-Nanjing makiromita zana nemashanu, kumaodzanyemba kusvika Wuxi Sunan International Airport makiromita makumi mashanu. Jinghu uye yanjiang migwagwa miviri mikuru inosangana muJiangyin ndima, jiangyin Yangtze Rwizi mugwagwa mukuru bhiriji inotaurirana kuchamhembe nekumaodzanyemba kweYangtze rwizi, yakakosha nzvimbo yekutakura muYangtze Rwizi rwizi rwizi. Wuxi Cayce May Technology Trading Co, Ltd iri kumatunhu ekumabvazuva epaki yemaindasitiri.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co, Ltd iri Joint-stock bhizinesi rinotarisana neSainzi, Indasitiri uye Kutengeserana. Iine vashandi vanopfuura mazana matatu, kusanganisira vanopfuura makumi masere nevashanu vevashandi vekoreji nehunyanzvi Iye zvino inhengo yemagetsi ezuva mambure muChina. Kambani yedu yapfuura ISO9001: 2008 Hunhu Management Management Certification, ISO14001 Environmental Management System Certification, 18001 Occupational Health uye Safety Management System Certification. Izvo zvigadzirwa zvinosanganisira peturu, petrifaction, chikafu, kutumira, njanji uye elektroni mutsara, nezvimwe. Iye zvino isu tine anopfuura zviuru makumi mana emamirimita emamita ekugadzirisa nzvimbo uye anopfuura makumi masere zvigadzirwa zvakasarudzika zvekugadzira, kutengesa kwegore kwegore ra2018 kuri mazana maviri emamiriyoni. Kambani yedu ine yekutengesa, kushambadzira, dhipatimendi rebasa, dhipatimendi rezvehunyanzvi, QC, imba yekugadzira, dhipatimendi rekugadzira, marabhu, dhipatimendi rebasa, nezvimwe, izvo zvinopa yakasimba vimbiso sisitimu yekugadzira, mhando yekutengesa uye mushure-kutengesa zvigadzirwa.
Mumakore achangopfuura, kambani yakaisa mari kwazvo mumhuri dzakasimba, dzakagadzirwa uye dzakagadzirwa zvinopfuura gumi mabhanhire emagetsi ekutakura, machira erabha uye raibha dhizaini yekugadzira. Iye zvino tava nemabanbury matatu, 12 musanganiswa muchina, mumwe 1830 mana-roll calender, imwe 1730 matatu-roll calender, masere 1400 dhiramu-yerudzi rwekurapa muchina, maviri 1800 dhiramu-mhando kurapa muchina, maviri 2000 dhiramu-yerudzi rwekurapa muchina, imwe 2200 Dhiramu-mhando kurapa muchina, imwe 3000 dhiramu-yerudzi kurapa muchina, imwe 4200 dhiramu-yerudzi kurapa muchina, 4200 dhiramu-mhando kurapa muchina ndiyo hombe pasi. Zvakare, isu tine maseti masere ekudhinda muchina, ndiko kuti 2400 * 10000, 4000 * 2000, 1500 * 3000, 1400 * 5700, 1400 * 4000, 1200 * 2700, 650 * 4000.Muna 2016, takaita muchina wepamusoro-soro, upamhi iri 24 metres.
Caycemay inotarisana nekuunza zvinhu zvakaoma pamwe chete nezvinhu zvakapfava. Vazhinji vevashandi vane hunyanzvi uye vanokwanisa vari kuita uye kudzidziswa kuve nechokwadi chekushanda kwemhando yehurongwa, manejimendi ekugadzirwa uye kugona kugona kwechigadzirwa. Zvichakadaro, kuitira kuunganidza ruzivo rwekupedzisira rwemusika uye mameseji meseji ayo ari mukuda kwekukura uchibudirira nezvigadzirwa zvitsva, Caycemay yakaumba hukama hwehukama hwechigarire uye hwakagadzikana nemamwe masangano ekuferefeta. Parizvino, kambani ine gumi nemaviri patents, dhizaini silicone rabha jira, kupisa-nemishonga silicone cushion indasitiri zviyero, kutora chikamu mukudzokorora kwenyika zviyero zverabha flooring.
Hupenyu hupenyu hwekambani, iyo kambani inonamira kukoshesa kukuru kwechigadzirwa kudzora, isu tine tsvimbo dzehunyanzvi dzinotarisa pane zvemhando yepamusoro manejimendi, isu tine zvigadzirwa zvehunyanzvi zvigadzirwa, imba yekuyedza, marabhu. Mukugadzirwa, tinonamatira kune zvakagadziriswa kugadzirwa, kuomesa kwakasimba kwenzvimbo dzenyika, zviyero zveindasitiri uye zvebhizinesi zviyero, kuti zvigadzirwa zvigone kugutsa zvinodiwa nevatengi.
Zvigadzirwa zvekambani yeCaycemay zvine chekuita nekugadzirwa kwenyika mumaindasitiri akasiyana siyana munyika, zvimwe zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzimwe nyika. Chiyero chayo chekugadzira, mhando, mutengo, kuendesa uye mutengi sevhisi vane yavo yekurumbidza yevatengi uye vanakidzwa yakakwira mukurumbira.
Zvigadzirwa zveCaycemay zvinonongedza chepamusoro-giredhi, kugaya uye kupinza yekunze tekinoroji yepamusoro, ibasa kutsiva zvinotengeswa kunze kwenyika, kuwedzera mwero wechipfuwo. Mucheka unodzima moto wemotokari yezvitima unopihwa kumakambani ekunze; silicone rabha jira rezuva laminator, girazi, kuveza uye kugadzira makadhi kunakidzwa nemukurumbira wakanaka; rabha pasi iri kusimukira chaizvo.
Ine pfungwa yekuti yemhando yepamusoro, sevhisi yepamusoro, mutengo wemakwikwi unodzikamisa nekukudza kambani, Caycemay anoramba achivaka tsika nepfungwa ye "zvichibva pamunhu." Ichi chiito chinokurudzira zvakanyanya vashandi kuti vavandudze mutoro uye kugona kwekuvandudza izvo zvinowedzera simba nekubatana kwebhizinesi.
Nepfungwa "yakatendeka uye kuvimba inokwezva vatengi pasirese", Caycemay nekushinga anokugamuchira iwe kuti ushanyire fekitori netariro yekuzadzisa kuvimba kwako, rutsigiro uye kurumbidza nekuda kwezvakanakisa zvigadzirwa uye sevhisi yeCaycemay.
Caycemay yakagadzika seti yehunhu hwehuvimbiso system kubva kune zvakasvibirira zvinhu zvinopinda mufekitori kune chigadzirwa mushure mekutengesa sevhisi uye nyowani yechigadzirwa chigadzirwa chekuvandudza neinjiniya nehunyanzvi vashandi semuviri mukuru. Pamusoro pe kudzikamisa kugadzirwa kwezvinhu zviripo uye nekuvandudza hunhu hwechigadzirwa. Wedzera kusimba kwekushandurwa kwetekinoroji uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, uye kuburikidza nekubatana pamwe nedzimba dzekutsvagisa kwesainzi nemayunivhesiti. Bhadhara nyanzvi dzinobva kunze kwenyika. Gadzirisa matambudziko ehunyanzvi mukugadzirwa uye gadzira zvigadzirwa zvitsva. Caycemay kambani inoda kupa vatengi mabasa akavimbika uye akarongeka, kupindura uye kubvisa kutapurirana (conveyor) bhandi mashandiro zvikanganiso uye sarudza yakakodzera kufambisa (conveyor) bhandi zvigadzirwa kusangana nemushandisi mashandiro ekutsanangurwa uye zvinoshandiswa zvinoshandiswa. Iyo yekudzika yekugadzirisa michina yakagadzirirwa uye kugadzirwa nekambani inogona kuve nechokwadi chekukurumidza uye kunoshanda kwekubatana kwebhanhire uye kune-saiti kubatana kweye bhandi nemushandisi. Deredza nguva yekuzorora. kuderedza kugadzira mutengo. Mushandisi anogona kudoma saizi uye zvakatemwa zvebhanhire, bhandi risingaperi kana bhandi rakavhurika, kana gundi inosimudza mitsetse, mapiketi ekuperekedza kana masiketi pabhandi. Isu tinoziva neako kwese kudiwa kwemabhanhire, uye tinotenda kuti sevhisi yedu ichakubatsira iwe.